ရခိုင် သတင်းများ သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၂
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် အိန္ဒိယ သံအမတ် ဒေါ်လာ ၂ သိန်း လှူ
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေးများ အတွက် အိန္ဒိယက အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ သန်း လှူဒါန်း ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. V.S. Seshadri က အိန္ဒိယ သမ္မတ နိုင်ငံကိုယ်စား ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင် ထံသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ၌ ပါရှိသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ရှောင်တိမ်းရသူ ဒုက္ခသည် ၅၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း အစိုးရက ပြောဆို ထား သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးဌာန အကြီးအကဲ မစ္စတာ အာရီမူဟာဒီ ဦးဆောင်တဲ့ ၆ ဦးပါ ကူညီရေးအဖွဲ့ဟာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းကူညီဖို့အတွက် မနေ့က မနက်ပိုင်းက စစ်တွေမြို့ကို ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သတင်းပြန်ကြားရေးနဲ့ မှတ်တမ်းပြုစုရေး ကော်မတီဝင် ဦးမျိုးသန့်က Media ကို အတည်ပြု ပြောပါတယ်။
"ပြန်မဲ့ရက်တော့ အတိအကျမသိရသေးဘူး။ ၂ ရက် ၃ ရက် ကြာမယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ Camp တွေကိုလိုအပ်တာအတွက် ပံ့ပိုးကူညီဖို့လေ၊ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ အဲဒါလေးတွေ သူတို့လုပ်နေပါတယ်"
အဲဒီ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးဌာန အကြီးအကဲဟာ မနက်ပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နေ့လည်ပိုင်းမှာ ဘောလုံးကွင်း ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ မင်းဂံ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာလည်း တစ်ခြားကျန်ရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ဆက်လက် သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီး စောင်နဲ့ အမျိုးသမီး အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ပေးအပ် လှူဒါန်းသွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နေ့လည်ပိုင်းမှာ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အခြေအနေတွေအတွက် ပြည်နယ်ကျန်းမာရေး တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Posted by wanna23 at 22:29